Blockchain Observatory na Forum-eweta EU na "ebute ụzọ" nke Blockchain Tech - Blockchain News
EU-ebupụta Blockchain Observatory na Ethereum mmalite
ConsenSys, otu n'ime ndị kasị a ma ama startups na ethereum ilekota, ga-arụ ọrụ na European Commission on ya EU Blockchain Observatory na Forum, nke eze ulo oru Thursday.
The abụọ afọ ime ga-enweta ego ruo € 340 nde ($425 nde) na blockchain oru. The Commission mbụ mara ọkwa ụzọ ikpeazụ spring, ehota ọchịchọ ya mụbaa institutional ihe ọmụma nke blockchain na-ekesa Ledger teknụzụ.
“Dị ka ihe dị mkpa omee ke blockchain obodo, ConsenSys ga-eme ka ike nkwa blockchain development, siri ike nka na njikọ na ụwa na blockchain ilekota, na ihe entrepreneurial obibia na-arụ na ndị nketa oke na ndị ọkachamara na EU na n'ụwa nile,” na EC kwuru Thursday na a na nkwupụta-ekpughe mmekorita.
ConsenSys, a zuru ụwa ọnụ “ịmalite mmepụta studio” na-amalite software bụ isi maka ethereum blockchain, e tọrọ ntọala site Joseph Lubin, onye CoinDesk profiled n'ihi na ya kasị akpa na Blockchain 2017 usoro.
erikwa na-elekwasị anya
The Commission si mara ọkwa kpọmkwem pụta ìhè ọchịchọ ya ịchịkọta blockchain maka abamuru nke ndị otu European ahịa, na kwuru na a bụ isi ebumnobi nke Observatory na Forum bụ iwu na ẹdude ngo iji jide n'aka na ha na-arụ ọrụ gafee ala.
Commissioner maka Digital Economy na Society Mariya Gabriel kwuru:
“M na-ahụ blockchain ka a game changer na m chọrọ Europe na-na-ebute ụzọ ya mmepe. Anyị kwesịrị igosi nri eme na gburugburu ebe obibi - a Digital Single Market maka blockchain ka ụmụ amaala niile nwere ike irite uru, kama a patchwork nke atumatu. The EU Blockchain Observatory na Forum bụ nzọụkwụ dị mkpa na direction.”
Valdis Dombrovskis, ihe EC osote onyeisi oche na-elekọta ego kwụsie ike, ego ọrụ na Capital Markets Union, n'etiti ọzọ na oru ngo, onye mbụ kwuru na EU nwere mmasị na blockchain technology, kwuru na Observatory ga-eduzi EU policymaking.
Ọ jara echiche nke blockchain technology, si “n'etiti ọtụtụ teknụzụ na-akwọ ụgbọala digital ọhụrụ, blockchain nwere nwere na-n'ezie transformative maka ego ọrụ na ahịa.
St. Louis Federal Reserve: Bitcoin bụ Dị Ịgachi Ego
Argentina a chọrọ iji wụnye 4,000 TO 5,000 Kaadị ATMs ná mba
Argentina nwere ike n'oge na-adịghị b ...
Previous Post:Gbasie faịlụ patent ịnabata Bitcoin maka igbe
Next Post:Ugboro abụọ ọnụọgụ weere ekpochapụ kaadị Asset Market